२०औँ करोड खर्चिएर भएपनि अख्तियार प्रमुख बन्न दौडधुप गरिरहेका लोकमानका अर्का अवतार दिप बस्न्यात कस्ता छन? – ZoomNP
२०औँ करोड खर्चिएर भएपनि अख्तियार प्रमुख बन्न दौडधुप गरिरहेका लोकमानका अर्का अवतार दिप बस्न्यात कस्ता छन? प्रकाशित मिति: बुधवार, कार्तिक १०, २०७३ समय - २३:५५:२६ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने लगभग पक्काजस्तै छ । कांग्रेसले उनलाई राजीनामा गराउन खोजेको छ । राजीनामा नदिए उनी महाभियोगबाटै पदच्यूत हुनेछन् । लोकमानको बहिर्गमनपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन अर्का विवादित र बदनाम पात्र दीप बस्न्यात शक्तिकेन्द्रको चक्कर काट्न थालेका छन् ।
नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ मा अख्तियारमा पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान जारी गर्नुपूर्व रहेका पदाधिकारीलाई कार्यकाल पूरा गर्न पाउने व्यवस्था अनुसूचीमा छ । केशव बरालको पदावधि सकिएको र लोकमानको बहिर्गमनपछि अख्तियारमा अब नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पाइँदैन । हाल अख्तियारमा दीप बस्न्यात, नवीन घिमिरे, डा. गणेशराज जोशी, सावित्री थापा गुरुङ र राजनारायण पाठक आयुक्त छन् ।
संविधानअनुसार अब प्रमुख आयुक्त यिनै आयुक्तहरूमध्येबाट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यही थाहा पाएर आयोगको प्रमुख हुन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात चलखेलमा लागेका छन् ।
संविधानअनुसार अब प्रमुख आयुक्त यिनै आयुक्तहरूमध्येबाट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यही थाहा पाएर आयोगको प्रमुख हुन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात चलखेलमा लागेका छन् । आयुक्त हुन तत्कालीन बस्नेतले मन्त्रीदेखि विभिन्न नेतालाई ५ करोड खर्चेको चर्चा त्यसबेलै चलेको थियो । उनी अहिले २०औं करोड खर्च गरेर भए पनि प्रमुख आयुक्त हुने धुनमा नेताहरूको दैलो चहार्न थालेको बताइन्छ ।
अख्तियारमा आयुक्त भएपछि लोकमानसँग मिलेर इमानदार राष्ट्रसेवक र नेताहरूविरुद्ध लागेका दीप बस्नेतले लोकमान हट्ने पक्का भएपछि ९० डिग्री परिवर्तन भएर उनीविरुद्ध भाषण गरेका छन् । कात्तिक ७ गते बस्नेतले अख्तियारमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रममा लोकमानको तानाशाही अब नचल्ने भाषण गरेपछि कर्मचारीहरू उनको शैली देखेर आश्चर्यमा परेका छन् । लोकमानकै योजनामा अख्तियारको आयुक्त बनाइएका बस्नेतले उनीसँग मिलेर अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने अखडा बनाएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । अख्तियारमा लोकमानले आयुक्तहरू बस्नेत र राजनारायण पाठकसँग मिलेर ठूला भ्रष्टाचारीहरू सचिव अर्जुन कार्की, उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालगायतलाई संरक्षण गर्ने काम गरेका हुन् ।
लोकमानकै योजनामा अख्तियारको आयुक्त बनाइएका बस्नेतले उनीसँग मिलेर अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने अखडा बनाएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
तर, अहिले बस्न्यात एकाएक क्रान्तिकारी भएर लोकमानको विरोध गर्न थालेपछि अख्तियारभित्रै उनी उपहासका पात्र बनेका छन् । दीप बस्न्यातले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत भाइ श्याम बस्नेतलाई एक वर्षअघि रसुवागढी भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरे । केही महिनाअघि उनलाई लोकमानलाई दबाब दिन लगाएर विराटनगर भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेका छन् । अधिकृत भए पनि विराटनगर भन्सारको हर्ताकर्ता श्याम बस्नेत नै भएको भन्सारका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनको मिलेमतोमा बिराटनगर भन्सारबाट ठूलो मात्रामा तस्करीको लाइन चल्ने गरेको छ ।
लोकमानकै डिजाइनमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाको कोटाबाट उनी आयुक्त भएका थिए । सुनिल थापादेखि डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, हरिबहादुर बस्नेत, बुद्धिमान तामाङ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकी सहयोगी मृदुला कोइरालालाई आर्थिक सहयोग गरी उनी आयुक्त नियुक्ति भएका थिए । उनले आयुक्त बन्न ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा हुने गरेको छ ।
झापा मालपोत कार्यालयको प्रमुखबाट घूस खाने इलम सुरु गरेका बस्न्यातले पञ्चायतकालमा शरच्चन्द्र शाहलाई खुसी पारी मालदार कार्यालय चाहँदै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारको प्रमुख, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक हुँदासम्म अरब जति सम्पत्ति जोडेको उनलाई जान्ने अर्थका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्थमा राजस्व समूहको इतिहासमै लोकमान र बस्नेतले बढी भ्रष्टाचार गरेको उनलाई चिन्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । पञ्चायतकालभरि शरदचन्द्र शाह, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका निकट उनी २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि डा. रामशरण महतका प्रियपात्र भएर रोजेका निकायमा प्रमुख भई अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भए ।
झापा मालपोत कार्यालयको प्रमुखबाट घूस खाने इलम सुरु गरेका बस्न्यातले पञ्चायतकालमा शरच्चन्द्र शाहलाई खुसी पारी मालदार कार्यालय चाहँदै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारको प्रमुख, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक हुँदासम्म अरब जति सम्पत्ति जोडेको उनलाई जान्ने अर्थका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
उनका विरुद्ध अख्तियारमा नक्कली प्रमाणपत्रलगायत अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी पनि परेको छ । जुन उजुरी तामेलीमा राखी उनी पछि त्यही निकायको आयुक्त हुन सफल भए । मालपोतदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुँदा कमाएको अकूत सम्पत्तिले बानेश्वरमा ११ रोपनी क्षेत्रफलमा महल बनाएका बस्नेतको घरमा चारवटा त बैठक कक्ष नै रहेको उनकोमा जाने व्यापारीहरू बताउँछन्
। एउटा भीभीआईपी, भीआईपी र व्यापारी भेट्ने छुट्टाछुट्टै बैठक कक्षमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको रक्सी नै सजाएर राखिएको उनको घरमा जाने व्यापारीहरूले भन्ने गरेका छन् । यस्ता विवादित र भ्रष्ट बस्नन्यातलाई प्रमुख आयुक्त नबनाउन सिफारिसताका नै आवाज उठे पनि अहिले लोकमानको बहिर्गमन हुने पक्का भएपछि उनी दौडधुपमा लागेका छन् । अख्तियारका एक अधिकारीले भने– ‘बस्नेतलाई प्रमुख बनाउनु भनेको एउटा लोकमानको ठाउँमा अर्को लोकमान ल्याउनु हो भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।’ पहिलो न्युज बाट